DialogTech: Antsoy ny Attribution and Analytics Conversion | Martech Zone
DialogTech: Antsoy ny Attribution Attribution and Conversion Analytics
Alarobia, Martsa 30, 2016 Alarobia, Martsa 30, 2016 Douglas Karr
Talohan'ny finday avo lenta sy ny fitaovana finday, rehefa ny desktop marketing 100 isan-jato dia tsotra kokoa ny fanomezan-danja. Mpanjifa iray no ni-tsindry ny doka na mailaky ny orinasa iray, nitsidika pejy fananganana, ary nameno ny takelaka iray na ho lasa mitarika na hamita fividianana.
Ny mpivarotra dia afaka mamatotra an'io firaka na fividianana io amin'ny loharanom-barotra marina ary handrefesana tsara ny tamberim-bidy isaky ny fampielezana sy fantsona. Nila nandinika fotsiny ny mikasika rehetra mikasika ny famaritana ny sandan'ny fantsona tsirairay izy ireo, ary afaka nanatsara ny vokany tamin'ny fidiram-bola tamin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'izay mandeha sy manafoana izay tsy misy. Ny CMO dia afaka niaro tamim-pahatokisana ny teti-bolan'izy ireo tamin'ny CEO tamin'ny alàlan'ny fanaporofoana ny fiantraikany amin'ny vola miditra.
Saingy amin'izao tontolo izao voalohany-finday izay isan'ny mpanjifa marobe miova amin'ny alàlan'ny fiantsoana dia fanamby bebe kokoa ny fanomezana - tsy amin'ny famaritana ny loharanon'ny antso ihany, fa ny vokatr'izany koa. Ireo antso an-tariby amina miliara an'arivony ireo dia mivoaka ivelan'ny fahitan'ny ankamaroan'ny fitaovana marketing, mamorona lavaka mainty goavambe amin'ny mpivarotra angon-drakitra marketing dia miankina amin'ny fanaporofoana ROI sy hanatsarana ny famokarana vola miditra. Ity data ity momba ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny antso dia very mandrakizay. Ity data ity dia mety ahitana:
Loharano fiantsoana ny marketing: Ny fantsom-pifandraisana, nomerika, na ivelan'ny Internet no nahatonga ilay antso - ao anatin'izany ny doka, fampielezan-kevitra ary ny fikarohana teny lakile - ary izay pejin-tranonkala sy atiny ao amin'ny tranokalanao nojeren'ny mpiantso taloha sy taorian'ny niantsoany.
Data an'ny mpiantso: Iza ilay miantso, ny nomeraon-telefaonany, ny toerana misy azy ireo, ny andro sy ny ora iantsoana, sy maro hafa.
Karazana antso: Inona no tanjon'ny mpiantso azy - antso ho an'ny varotra ve izy io na karazana hafa (fanohanana, HR, fangatahana, asa diso, sns.)?
Valiny sy sanda antso: Izay nanodinana ny antso, naharitra hafiriana ny resaka, inona no nolazaina tamin'ny antso, ary raha nivadika ho varotra fivarotana na ho fidiram-bola (sy ny habe na ny sandan'ny fotoana mety) ny antso.
Attribution ho an'ny antso an-tariby no fanamby maika indrindra atrehin'ireo mpivarotra tarihin'ny data ankehitriny. Raha tsy misy izany, ny mpivarotra dia tsy afaka mandrefy ROI ara-barotra sy manatsara ny fandaniana amin'izay tena mitondra fitarika sy fidiram-bola. Ho fanampin'izany, ny mpivarotra dia tsy afaka miaro am-pitokisana ny tetibola ho an'ny CEO. Raha fintinina, ny lavaka mainty dia mametraka ekipa marketing eo ambany tsindry bebe kokoa hiaro ny lanjan'izy ireo ary handany ny mpanjifan'ny orinasa.
“Ny antso an-tariby miditra dia iray amin'ireo tondro mividy matanjaka indrindra amin'ny dian'ny mpanjifa rehetra. DialogTech dia manome alalana ireo ekipa sy masoivohon'ny varotra orinasa hanatsara ny fanentanana dizitaly ho an'ny antso ataon'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny vahaolana sy ny fizotran'ny martech efa ampiasain'izy ireo amin'ny tsindry. ” - Irv Shapiro, CEO, DialogTech
DialogTech miasa ho mpiara-miasa stratejika amin'ireo orinasa, masoivoho ary orinasa mitombo haingana manerana ny indostria maro karazana. Ny mpanjifa amin'izao fotoana izao dia misy an'i Ben & Jerry's, HomeFinder.com, Comfort Keepers, Terminix, miaraka amina tranga fampiasana telo maharesy lahatra F5 Media, HotelsCorp, ary Ivon-kidoro matory fiaran-dalamby.
Mampiasa ny fanaraha-maso antso mahomby amin'ny alàlan'ny fanondroana sy ny fanovana ny fanovana, ny mpivarotra dia afaka manatsara ny fampielezan-kevitra amin'ny fikarohana AdWords sy Bing tsy handroahana antso bebe kokoa fotsiny, fa mpanjifa sy fidiram-bola bebe kokoa:
Mampiasà Tracking Call Level-Level mba hanaporofoana sy hanatsarana ROI: Fantaro tsara ny fomba itondran'ny fampielezan-karoka karamanao antso, avy eo manatsara ny teny lakile, doka, pejy fipetrahana, toerana ary andro / ora izay mampiantso ny mpanjifa betsaka indrindra (sy tsara indrindra).
Ireo mpiantso ny zotra mifototra amin'ny angon-drakitra fanarahana antso: Ampiasao ny angon-drakitra fanaraha-maso antso voasambotra tamin'ny fotoana niantsoana mba hitondrana tsara ny fahaizan'ireo miantso tsirairay, hitondra azy ireo amin'ny olona tsara indrindra hanova azy ireo ho amidy. Ny teknolojia fanodinana antso dia afaka mitarika ny mpandray anjara amin'ny fotoana tena izy mifototra amin'ny safidy maro isan-karazany, ao anatin'izany ny loharanom-barotra (teny lakile, doka ary pejy fitodiana), ny ora sy ny andro, ny toeran'ny mpiantso, sy maro hafa.
Fakafakao ny resadresaka hanatsarana ny PPC: Mampiasà resaka Analytics teknolojia hijerena raha toa ireo mpiantso fikarohana karama nampiasa ny rambonao lava na teny lakile hafa, ny fomba famaritany ny alahelony sy ny vahaolana tian'izy ireo, ary maro hafa. Azonao atao ny mampiasa an'io fahalalana io mba hanitarana na hanitsiana ny fikendrena ny teny lakile ary hahomby kokoa ny fandefasana hafatra sy ny pejy fitobiana.
Ny sehatry ny DialogTech dia mamaha ny iray amin'ireo fanamby maika indrindra amin'ny tontolon'ny finday voalohany amin'ny alàlan'ny fanesorana ny lavaka mainty amin'ny angona fampisehoana marketing amin'ny antso anaty. Rehefa miatrika tsindry mafy ny mpivarotra hitondra fiara tsy ny fitarihana ihany fa ny fidiram-bola, ny sehatry ny DialogTech dia manome tanjaka ny mpivarotra amin'ny alàlan'ny angon-drakitra fiantsoana antso ilaina hividianana antoka amin'ny fampielezan-kevitra miantso antso, ary koa ny teknolojia fiovam-po ilaina hanovana ny mpiantso ho mpanjifa. Izy io dia teknolojia fampidirana antso sy fiovam-po namboarina manokana ho an'ireo mpivarotra izay miasa amin'ny antso amin'ny toerana rehetra ary azo ampiasaina miaraka - na tsy miankina tanteraka amin'ny ivon-toeran'ny orinasa.
DialogTech dia manome:
Data data fanamarihana antso farany-ho-farany: Mihoatra lavitra noho ny fanarahana ny antso. Ny vahaolana tokana izay milaza amin'ny mpivarotra ny fomba fampielezan-kevitr'izy ireo ny antson'ny mpanjifa, raha mivadika ho varotra ny antso, ary maninona - manidy ny faribolana eo anelanelan'ny dolara lanin'ny dolara azo.
Teknolojia fanovana fiantsoana fotoana tena izy: Ny hany vahaolana ho an'ny mpivarotra hifehy ny fivezivezena sy hanokana ny traikefa an-tariby amin'ny fotoana tena izy, hiantohana ny olona miantso avy hatrany mifandray amin'ny olona tsara indrindra hanova azy ireo ho amidy.
DialogTech vao natomboka SourceTrak ™ 3.0 - ny vahaolana antso voalohany sy tokana natao hanarahana ny angon-drakitra, fahaiza-mividy, fahamendrehana ary fanamorana ny fampiharana ny orinasa Fortune 1000, fikambanana lehibe misy toerana maro ary ireo masoivohon'ny marketing iarahan'izy ireo.
Ho fanampin'ny SourceTrak 3.0, DialogTech dia nandefa ireto vahaolana manaraka ireto tamin'ny 2015, ary manome hery bebe kokoa ny Voice360® sehatra:
Fisorohana SpamSentry ™ Spam Call: Ny vahaolana tokana ao amin'ny indostrian'ny fanaraha-maso ny antso izay mampiasa teknolojia fampifanarahana amin'ny milina izay mampiato ny antso hosoka sy tsy ilaina alohan'ny hahatongavany amin'ny ekipa fivarotana orinasa iray. SpamSentry manakana ny angon-drakitra antso spam tsy hiseho ao amin'ny Analytics miankina amin'ny fandrefesana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny finday ny mpivarotra. Ny endri-javatra lehibe dia ahitana: Tambajotra neural artifisialy, azo ovaina amin'ny spam vaovao, ary ny teknolojia keypress. Vakio bebe kokoa amin'ny:
DialogTech ho an'ny Marketing amin'ny finday: Ny vahaolana varotra voalohany sy tokana momba ny fanarahan-dia, ny fifehezana ary ny fanatsarana ny antson'ny mpanjifa amin'ny dokambarotra finday. Ity vahaolana ity koa dia manome ny mpivarotra ny marina indrindra Data momba ny antso ho an'ny haavo-teny ho an'ny fanitarana antso Google. Miaraka amin'ny fanamoriana antso, ny fahaiza-manao fanampiny dia ahitana: Fandefasana antso an-dahatsoratra, fandraketana antso amin'ny Insight Conversation ary Analytics, ary ny fampidirana mba hahitana mpiantso manokana ny fampielezan-kevitra Analytics angona misy rindranasa martech sy adtech hanatsarana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra.
LeadFlow ™ ho an'ny karama isaky ny antso: Ny vahaolana amin'ny alàlan'ny antso avo indrindra, ny lohateny ary ny vahaolana fitantanana namboarina ho an'ny fampielezan-karama isaky ny antso. LeadFlow manome ny mpivarotra Affiliate sy ny mpanatanteraka fifehezana tanteraka ny toerana alefan'ny telefaona finday isaky ny fantsom-barotra, izay isaina ho fitarika manan-kery ary maro hafa ireo antso ireo.
Tags: miantso analyticsantso fanamelohanafiovam-po antsovaliny antsosandan'ny antsodata an'ny mpiantsoanalytics fanovanafifampiresahanaloharanom-piantsoana marketingkarazana antso
Tombony 6 an'ny Twitter amin'ny fampiroboroboana ny marikao